Imran Chaudhri anotsanangura ruzivo rwekuti Apple Watch yakagadzirirwa sei IPhone nhau
Icho chava kutoita makore mashanu iyo yakaona mwenje kekutanga Apple Watch. Kubheja kune njodzi, senge ese iwo anotangwa nekambani yeCupertino. Chokwadi ndechekuti ini ndaive mumwe weavo vaifunga kuti havasi vanhu vazhinji vaizoshandisa maEuro mazana mashanu pawadhi yedhijitari yaive isingabatsiri kana ukasatakura yako iPhone muhomwe.
Makore mashanu gare gare, iine mishanu inogadziriswazve, ine yakafanana dhizaini yekugadzira (yakangokura chete 2 mm.) Apple inogona kuzvirumbidza kuti parizvino inotengesa mawatch akawanda kupfuura ese maSwitzerland vagadziri vakasanganiswa. Mumwe wevagadziri varo, ane zita risingazivikanwe, Imran Chaudhri, yakagovana ruzivo rwekunzwira tsitsi kwekutanga kugadzirwa kweApple Watch.
Nhasi igore rechishanu kubva muna 2015 kutanga kweApple Watch yepakutanga, uye mugadziri Imran Chaudhri, aive chikamu chechikwata chekutanga cheApple Watch, akagovana zvimwe zvinonakidza ruzivo nezve kusimudzira kweiyo yakakurumbira wachi kuburikidza TechCrunch.
mashoma mafaro chokwadi chekupemberera makore mashanu e #AppleWatch
heino mufananidzo wakatorwa nechikwata musi wekuvhura, ndipo pandiri ndiri pakati. (ndebvu dzinondi zera asi mukadzi wangu @bella_bongiorno haanditenderi kuti ndibve pamba ndisina izvozvo) pic.twitter.com/E1GufksZM1
- Imran Chaudhri (@imranchaudhri) April 24, 2020
Chaudri akatumira pikicha yeboka reApple Watch rakatorwa pazuva rekuvhura, pamwe nekuburitswa kwemufananidzo wake wepakutanga weiyo Apple Watch pamba chidzitiro, iine denderedzwa icon chimiro inofuridzirwa neiyo wachi yeyaidaidzwa pakutanga pier.
Dhijitari yekubata pakutanga yainzi ET yemagetsi kubata. Chaudri anoti akatumidza zita rekuti kugona kwayo senzira nyowani yekubatana mupfungwa. Iyo "ink" yekudhirowa yakafuridzirwa nemazuva ake e graffiti muimbi.
Inotaurira kuti yekutanga Apple Watch yakavakwa uchishandisa 6th chizvarwa iPod Nano yakasungirirwa kune Apple Tambo tambo. Yakagadzirwa kudzidzisa Siri uye Notification Center seyekutanga maficha eApple Watch.
Chaudhri akatsanangura zvimwe zvinoda kuziva, kusanganisira kuti kumeso kweSolar Watch kwakagadzirwa sei senzira yekuti maMuslim muRamadan vakurumidze kuona panomira zuva, kana kuti mabhatafurayi kumeso Apple Tarisa Motion vanga vakafa pavakatorwa mifananidzo kuti vasakuvadze hupenyu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Imran Chaudhri anotsanangura ruzivo rwekuti Apple Watch yakagadzirirwa sei